Ady & Fifandirana · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Desambra, 2008
Amerika Latina 29 Desambra 2008
Meksika: Manam-pahaizana manokana momba ny ady amin'ny fakana an-keriny nisy naka an-keriny
Amerika Latina 18 Desambra 2008
Mampatahotra ny maro ny heloka bevava any Meksika. Ny fakana an-keriny manokana moa dia mpitranga manerana ny firenena indrindra fa amin'ny ilany avaratra amin'ny firenena. Tranga mampihomehy amin'ity raharaha he recent abduction of U.S. anti-kidnapping expert Félix Batista is an ironic twist in this ongoing fight against organized crime, leaving some to wonder if experts are not safe, then where does that leave ordinary Mexicans?
Ejipta 17 Desambra 2008
Iràka 17 Desambra 2008
Ho fotoana iray manandanja amin'ny tantara izy ity? Ho avy ve ny andro na ny taona hitantaranao fa izaho, Montather Al-Zeidi, mpanao gazety Irakiana, dia hitantara amin'ny zafikeliko fa efa notorahiko ny kiraroko ny filohan'i Etazonia? Ho ahy moa dia nandeha nampatory ny zanako aho ny nikiry niantso ahy ny raiko fa tokony hamelona ny fahitalavitra avy hatrany aho. Saiky sahalahala amin'izany avokoa ny soratra voalohany nataon'ny mpamaham-bolongana Irakiana indray, rehefa natoritory am-bolana vitsivitsy izay, mba hilazany ny heviny fotsiny.